Al-Shabaab oo la wareegtay degaan la xoreeyay 9 sano ka hor | KEYDMEDIA ENGLISH
Al-Shabaab oo la wareegtay degaan la xoreeyay 9 sano ka hor
Kooxda Xiriirka la leh, Al-Qaacida, ayaa siyaadisay weerrada ay ku qaadeyso degaannada Shabeellaha hoose, saddex cisho ka hor ayay ahayd markii ay ciidamada Dowladda kula dagallameen degaanka Jasiira oo duleedka caasimadda dhaca.
AFGOOYE, Soomaaliya – Wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha hoose, ayaa sheegaya in dagaal-yahanno ka tirsan, faraca Al-Qaacida ee bariga Afrika, Al-Shabaab, ay la wareegeen gacan ku heynta degaanka Warmaxan iyo tuulada hoos tagta ee Shirey.
Ciidamdii Dowladda ee ku sugnaa degaannadaas ayaa cagahooda ku baxsaday, kadib dagaal kooban oo Kooxda Al-Shabaab ku awood roonaadeen, waxayna goobo fagaare ah kula hadleen dadka shacabka ah ee lagu dul dagaallmay.
Sida ay Keydmedia Online, u xaqiijiyeen Saraakiil ka howl-gala Shabeellaha hoose, dagaalka oo muddo kooban socday, ayaa sababay qasaaro dhimasho iyo dhaawac leh, waxaana Al-Shabaab af-duubteen nin magaciisa lagu soo koobay Waalow.
Warbaahinta ku hadasha afka Al-Shabaab, waxa ay sheegtay in wali ay ciidamo ka tirsan Al-Shabaab ku sugan yihiin Warmaxan, hayeeshee, dadka degaanka ayaa KON, u sheegay in ay magaalada ka baxeen, daqiiqado kooban kadib markii ay qabsadeen.
Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dhanka DF, xilli ay xusid mudan tahay, in Taliyaha Qaybta 60-aad ee Ciidanka Xoogga Dalka, General Maxamed Sheekh Cabdullaahi (Ciiro), oo degaankaas ka howl-galayay uu ka mid noqday Baarlamaanka.
Degaanka Warmaxan ee Al-Shabaab, caawa qabsadeen, waxaa la xoreeyay 9 December, 2012, intii lagu guda jiray howl-galkii Badweynta Hindiya, ee taliskii Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, Warmaxan ayaana ka mid ah magaalooyin uu dayacay Farmaajo.
Waxaana muuqata in hoggaanka Ciidanka Qalabka Sida, ku mashquuleen doorashooyinka, xilli la xasuusto in Al-Shabaab, bisha Ramadaan sare u qaadaan weerarrada iyo beegsiga dadka ka aragtida duwan, waana dayacaad amni iyo masuuliyad darro hor leh.
Degaanka Warmaxan, wuxuu hoos tagaa degmada Wallanweyn ee gobolka Shabeellaha hoose, waana marinka garoonka Balli-doogle, oo fariisan u ah ciidanka dowladda, horena u dagenaayeen ciidankii Mareykanka, ka hor inta aysan sanadkii hore ka bixin dalka.